Isifiso: Ukuqina Ukuphatha, Ukukhuthaza, Nokukhulisa Ukusebenza Kweqembu Lakho Lokuthengisa | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 17, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 17, 2021 UBrian Trautschold
Ukusebenza kokuthengisa kubalulekile kunoma yiliphi ibhizinisi elikhulayo. Ngethimba lokuthengisa elihilelekile, bazizwa benogqozi futhi bexhumeke ezinhlosweni nasezinhlosweni zenhlangano. Umthelela omubi wabasebenzi abahlukanisiwe enhlanganweni ungaba mkhulu - njengokukhiqiza okungenamsoco, nokuchitha ithalente nezinsizakusebenza.
Uma kukhulunywa ngethimba lokuthengisa ikakhulukazi, ukuntuleka kokuzibandakanya kungabiza amabhizinisi imali eqondile. Amabhizinisi kumele athole izindlela zokubandakanya amaqembu okuthengisa, noma abeke engcupheni ukwakha iqembu elingenzi kahle ngomkhiqizo ophansi kanye nezinga eliphezulu lenzuzo.
Ipulatifomu Yokulawulwa Kokuvelela Okuvelelayo
Ambition iyipulatifomu yokuphatha yokuthengisa evumelanisa yonke iminyango yokuthengisa, umthombo wedatha, kanye nemethrikhi yokusebenza ndawonye kuhlelo olulodwa olulula. Ukuvelela kunikeza ukucaca futhi kukhombisa izibalo zokusebenza zesikhathi sangempela kuzo zonke izinhlangano ezithengisayo.
Usebenzisa i-interface elula yokudonsa nokudonsa, ngisho nabaholi bezentengiso okungezona ezobuchwepheshe bangakha amakhadi wesiko, imincintiswano, imibiko, nokuningi. Nazi ezinye izindlela ezimbalwa abaholi bokuthengisa abasebenzisa ukuvelela kwisitaki sabo sobuchwepheshe.
Thatha i-Peloton uyenze isoftware yamaqembu wokuthengisa futhi une-Ambition-– coaching ugqozi ihlangene nebhodi yabaphambili ekhethiwe. NgePeloton, abagibeli bangabona ukuthi bama kuphi kulo lonke uhambo ngenkathi bekhulisa umphumela wabo. Nge-software ye-Ambition's gamification, abaholi bezentengiso bangakha umuzwa ofanayo ngemincintiswano emnandi, ama-TV okuthengisa, amabhodi wabaphambili nama-SPIFFs ukusiza ukushayela ushintsho olunenjongo ngaphakathi kwenhlangano.
Ukuqiniswa sekukhona amashumi eminyaka, ngandlela thile. Amathimba okuthengisa athole inani ekwakheni izikhuthazi nokukhuthaza ukuncintisana ukudala amazinga aphezulu okuzibandakanya nokugqugquzela phakathi kwabaphenduli. Ngemuva kwakho konke, ngubani ongathandi ukuncintisana okuncane?
Ukugqugquzelwa ukushintshela ngokushesha emsebenzini okude, ukugembula kuguquke kusuka ku- "nice-to-have" kuya ku- "need-to-have". Ukuziphendulela phakathi kwamaqembu sekubaluleke kakhulu njengoba amaqembu okuthengisa engasekho endaweni yokuthengisa. Ukuqiniswa kungabuye kunikeze abaholi bezentengiso ukuqonda ukuthi abasebenza kubo benza kanjani ngenkathi besebenza ekhaya futhi babavumele ukuthi bakhuthaze ukuncintisana okunempilo.
Isoftware Yokuqeqesha Yokuthengisa
I-coaching yokuthengisa ingumkhombandlela wesibambiso onomthelela omkhulu okumele wengeze ukusebenza komthengisi futhi, futhi, ube nomthelela omuhle eqenjini lokuthengisa lilonke. Akunandaba ukuthi imboni, inzuzo iyinkinga edumile ekuthengisweni, futhi amathuba okuthuthuka kochwepheshe angadlala indima ekugqugquzelweni komsebenzi ukuhlala.
Ngamaqembu awasekho phansi, abaholi bezentengiso abanalo ikhono lokuma edeskini labaphenduli babuze ukuthi baqhuba kanjani, babone lapho badinga khona usizo noma baphendule imibuzo esalile. Kodwa-ke, nge-Ambition, i-sales coaching yenza kube lula kubaphathi bezentengiso njengoba beqhubeka nokujwayela isimo sabo esikude. Izinkampani ezinkulu nezincane, abaholi bezentengiso bangasetha imihlangano ephindaphindwayo, barekhode izingxoxo, futhi bagcine amasu wezenzo konke endaweni eyodwa. Uhlelo lokuguquguquka nokuqina luvumela abaholi ukuthi baklame izinhlelo zabo futhi basebenzise imihlangano ephindaphindekayo ngakho-ke, lapho impilo iba sengozini, imihlangano isivele isethwe.
Ukuphathwa Kokuthengisa Nokusebenza
Ithimba lokuthengisa liyinjini enika amandla wonke amabhizinisi. Inqubo yokuphathwa kokusebenza kwenkampani kufanele igxile ekugcineni le njini isebenze kahle, ukuqeqeshwa kubuyela kumakhono abawadingayo ukufeza izinhloso zenhlangano nokuqapha inqubekela phambili yabo njengoba beqhubekela phambili.
Ngokuthola amagoli nemincintiswano yokukhiqiza idatha ye-CRM, abaholi bezentengiso bangaqiniseka ukuthi abaphenduli babo bangena kuyo yonke imisebenzi yabo, izinhloso zabo, namanothi kumakhasimende akhona nalawo angahle abe khona. Abaholi bezentengiso baphinde babonakale kumakholi aqediwe noma ama-imeyili aqediwe, futhi bahlelela noma bagcwalise imihlangano, futhi babuke ukuphindaphinda ku-quadrant yokukhiqiza ukubona ukuthi ngubani oguqula imisebenzi ibe yizinhloso nemiphumela.
Kubaphathi bezentengiso abafuna ukuthola ukuqonda ngokusebenza kwabo kwansuku zonke kokuthengisa kwabo, ipulatifomu ye-Ambition inikezela wonke umthengisi wokuthengisa ngekhadi lesikweletu elifaka phakathi imigomo yansuku zonke. Abaholi bezentengiso bayabona ukuthi ngabe i-rep ishiye usuku ngaphandle kokuphothulwa komsebenzi we-100% futhi ibavumela ukuthi bahlele iseshini yokuqeqesha esheshayo ukusiza abakwa-reps babuyele emgqeni. Ngenkathi kungekho kwesokudla indlela yokuqapha ukuthi abathengisi basebenza kanjani, besebenzisa uhlelo lokuphatha ukusebenza kokuthengisa, njenge-Ambition, kungaqinisekisa ukufinyelela kwimininingwane ethembekile futhi kuvumele abathengisi bezentengiselwano nabaholi bokuthengisa ukuqonda ukulungisa inkambo yabo.
Over Abaphathi bezokuthengisa abangama-3,000 sebenzisa i-Ambition ukusiza ukushayela izingcingo eziningi, ukubhuka imihlangano eminingi, nokugubha amadili amaningi avaliwe amaqembu abo okuthengisa akude noma asehhovisi. Njengoba abaholi abaningi bezentengiso babheka ukugoqa inani lamapulatifomu abawasebenzisayo, i-Ambition ikwenza konke. Ukusuka ekuqeqesheni ukuthengisa kuye kumabhodi wabaphambili, i-Ambition isiza abaholi bezentengiso ukuthi benze izinqumo ezihlakaniphe kakhulu nezinamasu avumela iqembu ukuthi lilethe ukusebenza okuphethwe kangcono okudingekayo ukuletha imiphumela.
Isifiso sokuvelela sihlangana ne-Salesforce, Slack, Dialsource, Cisco, ringDNA, Velocity, Gong, SalesLoft, Chorus, ne-Outreach… Amaqembu e-Microsoft ayeza maduze. Ukuze ufunde kabanzi nge-Ambition nokuthi ulawula kanjani ama-reps akho wokuthengisa:
Hlela Idemo Yokuvelela Namuhla
Tags: izifisoCiscoCRMI-Dialsourceukuthengiswa kwamabhizinisigongAmaqembu e-MicrosoftukufinyelelaindandathoDNAukuthengiswa kokuthengiswaimininingwane yokuthengisaukuphathwa kokuthengisaamamethrikhi wokuthengisaisisusa sokuthengisaukusebenza kokuthengisaukuphathwa kokusebenza kokuthengisaumkhiqizo wokuthengisayokubika yokuthengisaikhadi lesikolo lokuthengisaiqembu lokuthengisasalesforceUkuthengiswaLoftukuxegavelocity
UBrian Trautschold ungumsunguli kanye no-COO ku Ambition, ipulatifomu yokulawulwa kokusebenza kokuthengisa eyaziwayo eyenzelwe izinhlangano zokuthengisa eziqhutshwa yidatha nezinkulungwane zeminyaka. Xhuma noBrian ku-Twitter naku-LinkedIn bese uqala ingxoxo ngezinye zezihloko azithandayo: Ukuthengisa, ukuqala, ukumaketha kanye namahemuhemu wezohwebo we-NBA.